မိန်းမဖြစ်သူ ဖောက်ပြန်တယ်လို့ စိတ်ထင့်နေတာကြောင့် အောက်လမ်းအတတ်နဲ့ စမ်းသပ်ဖမ်းဆီးခဲ့သူ – Myanmar
မိန်းမဖြစ်သူ ဖောက်ပြန်တယ်လို့ စိတ်ထင့်နေတာကြောင့် အောက်လမ်းအတတ်နဲ့ စမ်းသပ်ခဲ့သူ
အောက်လမ်းပညာကို လူတော်တော်များများက မကောင်းတဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြပြီး အယုံအကြည်လည်း မရှိကြပါဘူူး။ ရှေးတုန်းက စုန်းတိုက်၊ ကဝေတိုက်၊ ဘီးလူတိုက်စတာ တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ လူကြီးတွေက ဒဏ္ဍာရီလိုပြောတာတော့ ကြားဖူးကြမှာပါ။ အခုခေတ်မှာတော့ ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာ၊ ကြုံတာတော်တော်လေး ရှားသွားပြီလို ပြောလို့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကင်ညာက အမျိုးသားတစ်ယောက်က အောက်လမ်းအတတ်တွေရဲ့ အစွမ်းကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ အသုံးချခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ သူ့မိန်းမကို ဖောက်ပြန်နေတယ်လို့ သံသယရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခိုင်လုံတဲ့ သက်သေကလည်း မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲ သူရဲ့အသိ ဝမ်းတွင်းအောက်လမ်းဆရာကို အောက်လမ်းအတတ်နဲ့ သေချာစေခဲ့တယ်။
သူဟာ အောက်လမ်းဆရာဆီသွားပြီး ဒီကိစ္စအတွက် တိုင်ပင်တယ်။ သူ့ရည်ရွယ်ချက်က သူမိန်းမကို လက်ပူးလက်ကြပ် မိချင်တာပဲ။ဒီတော့ ဆရာကလည်း သူမိန်းမကို ကျိန်စာတိုက်လိုက်တာပေါ့…. ကျိန်စာမှာ သူမနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ သူမှန်သမျှ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေချိန်မှာ ဒုက္ခရောက်…. ကပ်နေ ငြိနေ ခွာလို့မရစေနဲ့ဆိုတဲ့ ကျိန်ဆိုချက်တွေပါဝင်တယ်။
ကျိန်စာကပဲ ထက်သလား၊ ယောကျာၤဖြစ်သူရဲ့ သစ္စာပဲထက်သလား၊ သူ့မိန်းမနဲ့ နောက်လူတစ်ယောက် ဖောက်ပြန်နေတာကို ဒဲ့ကြီး မိလိုက်ပါတော့တယ်။ ရဲတွေလည်းရောက်လာပြီး ဝင်လည်း ဖမ်းရော ဟိုနှစ်ယောက်မှာ လုံးဝခွာလို့မရဘဲရှိနေတာကို အံအားသင့်ဖွယ် တွေ့ကြရတော့တယ်။ဒီလိုကြီးမိတဲ့အခါမှာ ယောင်္ကျားဖြစ်သူကလည်း လုံး၀ ကျိန်စာကို မဖြေပေးဘူးလို့ တင်းတာပေါ့။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲ မိန်းမရဲ့ ရည်းစားဆိုသူက သူအရှက်သိက္ခာနဲ့ ထိခိုက်မှုတွေအတွက် ဒေါ်လာ (၂၀၅) ကျပ်နဲ့ ကျေအေးပေးဖို့ တောင်းပန်တယ်။
နောက်ဆုံး ဘုန်းတော်ကြီးကို ပင့်ပြီး ဖြေခိုင်းလိုက်ရတယ်။ ဘုန်းကြီးက ကျူးလွန်တဲ့ အမျိုးသားကို “ဘုရားကို ယုံကြည်လား” မေးတယ်။ အမျိုးသားကလည်း ယုံကြည်တယ်လို့ ပြောတာနဲ့ တပြိုင်နက် ဘုန်းကြီးက “Siutoe hiyo kitu. Toka!” ဆိုတဲ့ “ဆွဲထုတ်လိုက်စမ်း…ထုတ်!” လို့ အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။
မိနစ်အနည်းငယ် ကြာတဲ့ နောက်မှာတော့ အမျိုးသားလည်း အမျိုးသမီးနဲ့ ခွာနိုင်ခဲ့ပြီး ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတကယ်ရှိလားဆိုပြီး ဖြစ်နေခဲ့ကြရပါတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းနဲ့ပေါ့။ကြာခိုတဲ့ အမျိုးသားကို ရဲတွေက သူပေးမယ် ကတိရှိတဲ့ ပိုက်ဆံကို ထုတ်ဖို့ နီးစပ်ရာ ATM ဆီကို ဝန်းရံပြီး ခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ခံရတဲ့ အမျိုးသားလည်း သူဇနီးနဲ့ ကွာလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။